Drick fitaovana mpiara., LTD. dia majoring amin'ny fikarohana, orinasa mpamokatra entana, sy ny asa fanompoana ho an'ny laboratoara ara-teknika sy ny Indostria fitaovana fitsapana.
Isika koa hanao ny asan'ny mpandraharaha, ary manome asa fanompoana fitiliana ny vokatra ny orinasa fantatra maneran-tany ao amin'ny tsena Shinoa. Ankoatra izany, dia pahavitrihana hampiroborobo ny asa toy ny varotra, fanohanana ara-teknika sy Ankehitriny-fivarotana fanompoana. Ny vokatra dia fampiharana an-tsaha toy ny papermaking, fonosana, fanontam-pirinty; fingotra sy ny plastika; lamba sy ny tsy-voatenona Industry; sakafo, fanafody sy ny sisa
Drick Instruments Co., Ltd. no nahazo CMC (Shina drefy Certification) (No. 01000127), Vondrona Eoropeana tamin'ny taona taratasy fanamarinana, PRC tena Import sy ny fanondranana ny zo, sns Izany dia nanome fitaovana fitiliana matihanina nandritra ny folo an'arivony mpanjifa an-trano, ary ny vokatra efa naondrana Amerika avaratra sy Atsimo, Aostralia, ny Vondrona Eoropeana, ny Afovoany atsinanana sy Azia Atsimo atsinanana, etc.
Taorian'ny fananganana, ny tehina rehetra Drick mampiray ny miara-miasa mafy ary dia toy izany no hahatonga ny orinasa ho manokana izay mandray teknika toy ny fakany, tokony hanaovan-tsoa ampy harena teknika sy ny kalitao avo. Ny orinasa manana tehina barotra amin'ny hery sy ny kalitao avo sy ny fanohanana ara-teknika mpiasa amin'ny fahalalana ampy tsara ny fitaovana sy ny teknika fampiharana teknika. Ankoatra izany, isika koa dia manana staff-ny aorian'ny fivarotana fanompoana amin'ny ankapobeny teknolojia sy be traikefa. Vokatra mandroso, tsara tarehy teknika, miasa mafy, sariaka fanompoana, izy rehetra miteraka tsy manam-paharoa ho an'ny kolontsaina ny Drick amin'izao fotoana izao.
Drick foana mitana hanitsaka ny teknolojia farany indrindra, ary manao amin'ny fanomezana izay mandroso indrindra vokatra ho an'ny mpanjifa. Drick dia manamafy ny teknolojia sy ny kalitaon'ny fiofanana fampandrosoana ny mpiasa. Ary dia toy izany ny orinasa dia manolotra fanompoana efa ho tonga lafatra ho an'ny mpanjifa. Ny tombontsoa natanjaka indrindra nitranga teo amin'ny teknolojia, vokatra sy ny tolotra mitondra ny mpanjifa maro ny tombontsoa raha mampiasa ny teknolojia vaovao sy ny vokatra.